လူမှုကွန်ယက် (မန္တလေး) နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ငွေ ၂ သိန်း ထောက်ပံ့
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေး လူမှုကွန်ယက် (မန္တလေး) ကနေပြီး အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ဒီနေ့ အကူငွေ ကူညီ ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကွန်ယက် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးကိုလေးက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
"ဒီလအတွက် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားကတော့ မသန္တာထွန်း အာသားဆိုက်ကပါ။ အင်းစိန်ထောင်မှာ ကျနေပါတယ်။ ပြစ်ဒဏ်က ၈ နှစ်ပါ။ ဦးဝင်းကြည် အိုးဘိုထောင်မှာ ကျနေပါတယ်။ ၂၂ နှစ်။ သူကတော့ အင်န်အယ်လ်ဒီကပါ၊ နောက် ကိုအောင်ကျော်ကျော် ကတော့ အရှင်ဂမ္ဘီရရဲ့ညီပါ။ တောင်ကြီးထောင်မှာ ကျနေပါတယ်။ နောက်အရှင်ဂမ္ဘီရ ကတော့ သာယာဝတီထောင်မှာ ကျနေပါတယ်။ အခု ဒီ ၄ ယောက်ကို တစ်ဦးလျှင် ၅ သောင်းနှုန်းနဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါပြီ။"
အဲဒီ ကူညီ ထောက်ပံ့ငွေတွေကို ကိုအောင်ကျော်ကျော်နဲ့ အရှင်ဂမ္ဘီရ အတွက်တော့ မိခင် ဒေါ်ရေး ကိုယ်တိုင် လက်ခံယူမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ဦးဝင်းကြည် နဲ့ မသန္တာ မိသားစုကိုတော့ နိုင်-ကျဉ်းကွန်ယက် အဖွဲ့ကနေ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားရောက် ပေးအပ်မယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
မန္တလေးအိုးဘို အကျဉ်းထောင် တစ်ခုထဲမှာပဲ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၉၀ ရှိတယ် လို့လည်း ဦးကိုလေးက ပြောပါတယ်။
မန္တလေး နိုင်-ကျဉ်းလူမှုရေး ကွန်ယက် အဖွဲ့ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့မှာ စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး မန္တလေးတိုင်း အတွင်းက ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လစဉ် ထောက်ပံ့ ကူညီခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်သံရုံးထုတ် China Today မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးအရေး
မန္တလေး အရိုးဆေးရုံအုပ်အပါအဝင် သုံးဦးကို အဂတိကော်မရှင်ထံတိုင်ကြား
တက္ကသိုလ်ဘောလုံးကွင်း ငှားရမ်းမှု ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကန့်ကွက်
မန္တလေးမှာ ကျူးကျော်အိမ်တွေ အင်အားသုံးဖြိုဖျက်ခံရ
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးဌာန တစ်နိုင်ငံလုံး တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းမည်
ရွှေကျောင်းက မြန်မာမှုလက်ရာတွေ ပျက်စီးမှာကို စိုးရိမ်
မှာပေါ့ လူ့လောက တိုးတက်ချင်တာမှန်ရင်လေ
Jul 15, 2015 04:51 AM
Please don't forget our political prinsoner. The main our concern is to release our political prisoners.
Dec 04, 2011 11:27 AM